Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama -walaalkiis oo sheegay inuu taageerayo Donald Trump.. | shumis.net
Home » News » Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama -walaalkiis oo sheegay inuu taageerayo Donald Trump..
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama -walaalkiis oo sheegay inuu taageerayo Donald Trump..
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama -walaalkiis ay isku aabaha yihiin Mr Malik ayaa sheegay inuu taageerayo doorashada musharraxa xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump isago ku amaanay inuu aad u wanaagsanyahay.
Mr Trump oo aad ula dhacay taageeraha ayaa markiiba bogiisa Twitter soo dhigay fariin qoraal ah isago farxad muujiniya Madaxweyne Obama walaalkiis Mr Malik aniga ayuu ii codayn doonaa .
Mr Malik ayaa ku tilmaamay Mr Trump hoggaamiye aragti dheer kaasoo wax ka beddeli doona dhaqaalaha Maraykanka.
"Donald trump waa qof aad u qiimo badan , islamarkaana arrimaha si toos ah u wajaha ma aha qof isdaba mariya erayadiisa' madaama aan ahay taageere xisbiga Jamhuuriga waxaan taageerayaa una codeen doona Donald Trump murashaxnimadiisa," ayuu yiri Mr Malik wareysi telefoon kula hadlaya wageeska Nation.
Si kastaba Donald Trump oo aanan horay xil loo soo doortay u qabanin ayaa tartan kula jiraa haweneydi horay u ahayd xoghayaha arimaha dibada ee Mareykanka Hillary Clinton oo mataleysa xisbiga dimuqraadiga
Title: Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama -walaalkiis oo sheegay inuu taageerayo Donald Trump..
Posted by Unknown, Published at July 26, 2016 and have 0 comments